नयाँ डिस्टिलरी-कम्पनी समाचार-गोलोंग लिकर (समूह) मा आउटिंग गतिविधि
नयाँ डिस्टिलरीमा आउटिंग गतिविधि
१ अगस्तको मितिमा, कम्पनीले हामी सबैलाई चकित पार्न एक आश्चर्यजनक आउटिंग गतिविधि व्यवस्थित गर्‍यो।
तपाईको कम्पनीको लागि आउट टीममा भाग लिनु भएको अन्तिम पटक कहिले हो? मेरो उत्तर गत वर्ष हो। कोरोना भाइरस को कारण, हामीले यसका लागि राम्रो कार्यका लागि धेरै धेरै गतिविधिहरू रद्द गर्यौं। यो अपरिहार्य छ कि हामी महान टीम निर्माण गतिविधिहरू र आउटिंगको महत्त्वलाई बेवास्ता गर्न सक्दैनौं।
कसरी अचम्मको टीम निर्माण अर्थपूर्ण घटना बिना हुन सक्छ? लियुआ Li्गको यस हप्ताको यात्राको उद्देश्य भनेको सबै गोलो people्ग व्यक्तिहरूलाई भविष्यको लागि गोलong्गको खाका बुझ्न र एक अर्काको राम्रो सम्बन्ध बढाउनु हो।
हामी सबै एक घण्टा ड्राइभ गरिसके पछि नयाँ डिस्टेलरीमा आइपुगेका छौं, जहाँ मानकीकृत होटलले सुसज्जित छ, जहाँ हामी आज राती बस्नेछौं। डिस्टिलरी डा वे माउन्टेन क्षेत्रमा अवस्थित भएको कारण, मौसम राम्रो थियो र हावा ताजा थियो।
सबै गोलong्ग जनताको मेहनतीका माध्यमबाट हामीले सबै कोठाहरू सफा गर्यौं र आज रातको बीबीक्यू कार्निवलको लागि तयारी पायौं। सबै बच्चाहरू माछा पोखरीमा खुशी संग खेलिरहेका थिए।
हामीले प्रबन्धक याang चांग्फु र हे लिiang्गको साथ नयाँ डिस्टिलरी वरिपरि छोटो यात्रा गरेका थियौं। हामी सबैलाई नयाँ डिस्टिलरी र हाम्रो कम्पनीको दर्शनको बारेमा स्पष्ट विचार थियो र कम्पनीको वर्तमान द्रुत विकासमा गर्व छ।
उत्साहजनक क्षण आउँदै थियो! बेलुकाको खाना तयार थियो। BBQ कार्निवल! सबै जना खाना र पेय पदार्थसँग खुसी थिए।
डिनरको समयमा, हरेक टीमले पेय पदार्थ र टोली मोटोहरू खडा गरेर उनीहरूको सुरुचिपूर्ण आचरण देखाए।
हामी सबैले ठूलो समय बिताइरहेका थियौं, एकाएक, बत्तीहरू सबै "कृत्रिम" बन्द गरिएका थिए, गोप्य प्रस्ताव समारोह सुरु हुनेवाला छ।
श्री यो तपाईले सुश्री गाओलाई सफलतापूर्वक प्रस्ताव गर्नुभयो! यो हाम्रो पहिलो सहकर्मीको लागि छोटो समयमा प्रस्तावको योजना बनाएको पहिलो पटक हो, यो एकदम चाखलाग्दो र रमाइलो थियो। दुई उत्तम खेलको लागि शुभकामना।
रात अझै जवान थियो। अद्भुत प्रस्ताव समारोह पछि, हामी रमाईलो गर्न मध्यरातमा कराओकेमा गयौं।
भोलिपल्ट हामी स्ट्रिमहरू ट्रेस गर्न गयौं र दिउँसो स्ट्रिममा बहावको लागि भेला भएका छौं।
समय उड्यो, रमाईलो समय सँधै छोटो थियो। जहिले पनि आउटिंग पछि, सबैको हृदयहरू धेरै नजिक हुन्छन्। यस अवसर प्रदान गर्ने कम्पनीलाई धन्यबाद, अर्को पटकको प्रतिक्षामा।
अघिल्लो: पुराना साथीहरु रणनीतिक विश्लेषण सहयोग बैठक को लागी